२२७ नेपाली विदेशी जेलमाः नौ नेपालीलाई मृत्युदण्डको फैसला,कुन देशमा कति ? - Top Nepal News
२२७ नेपाली विदेशी जेलमाः नौ नेपालीलाई मृत्युदण्डको फैसला,कुन देशमा कति ?
चैत्र १४, २०७३ मा प्रकाशित
Published at 2017-03-27
काठमाडौं,चैत १४ । ४३ लाख ८९ हजार नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा रहेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये दुई सय २७ जना नेपाली विभिन्न मुलुकको जेलमा छन् । हत्या, बलात्कार, लागुऔषध कारोबारलगायत गम्भीर अभियोगमा उनीहरूले जेलजीवन बिताइरहेका हुन् । तीमध्ये केहीलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ, केही ब्लडमनी तिर्न नसकेर जेलमा छन् भने केहीलाई जन्मकैदको सजाय सुनाइएको छ । यीबाहेक कागजात नमिलेर, भिसाको म्याद सकिएरलगायत अन्य सामान्य अभियोगमा के–कति नेपाली पक्राउ परेका छन् भन्ने तथ्यांक सरकारसँग छैन ।
रोजगारीको सिलसिलामा साउदी अरेबिया पुगेका नेपालीमध्ये ६९ जना जेल परेका छन् । बहराइनमा पनि सातजना नेपाली जेलमा रहेका छन् । एउटै कोठामा बस्ने नेपाली नागरिकको हत्या गरेका अभियोगमा भोजपुरका पर्शुराम राईलाई दक्षिण कोरियाको अदालतले १३ वर्षको कैद सजाय तोकेको छ । याँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
त्यस्तै नेपाली सहकर्मीसँग झगडा गरी दुईवटा औँला काटेको अभियोगमा झापाका शेखर पौडेल पनि दक्षिण कोरियामा पक्राउ परेका छन् । उनको मुद्दा विचाराधीन छ । कुवेतमा लागुऔषधको सेवन र कारोबारलाई ठूलो अपराध मानिन्छ । त्यहाँ पक्राउ परेकामध्ये अधिकांश नेपाली लागुऔषध सेवन र कारोबारको मुद्दा खेपिरहेका छन् । कुवेतको जेलमा रहेका नेपालीमध्ये ५३ जना केटा र नौजना केटी छन् । हत्याको आरोपमा समेत कुवेतको जेलमा केही नेपालीले सजाय काटिरहेका छन् ।
मलेसियाको जेलमा रहेका १३ नेपालीमध्ये सबैजना केटा छन् । तीमध्ये आठजना हत्या अभियोगमा पक्राउ परेका हुन् । ओमनको जेलमा भने तीनजना नेपाली मात्र जेलमा छन् । कतारमा ५२ जना नेपालीले जेलजीवन बिताइरहेका छन् । संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)का विभिन्न जेलमा १९ जना नेपाली छन् ।
एमाले महाधिवेशन : उद्घाटन समारोह सुरु
हेलम्बुमा आगलागी, तीन जना बालकको मृत्यु
कांग्रेसको प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशन आज
नौलो गेटअपमा प्रस्तुत हुँदै मलिका महत (फोटो सहित)
काठमाडौँ, मंसिर १२, २०७८ । काठमाडौ । थ्री मंकिज प्रोडक्सनको पहिलो…
ग्लोबल आइएमईको लाभांश सुरक्षित गर्ने अन्तिम दिन आज
काठमाडौँ, मंसिर १२, २०७८ । काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडको…
महिला टी-२० विश्वकप छनोट : निर्णायक खेलमा नेपालले आज यूएईसँग खेल्दै
काठमाडौँ, मंसिर १२, २०७८ । काठमाडौं । आईसीसी महिला टी-२० विश्वकप…
झण्डै दुई लाख अमेरिकी डलरसहित एक जना पक्राउ
काठमाडौँ, मंसिर ११, २०७८ । कास्की । पोखराबाट झण्डै दुई लाख…
इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा पाँच वटा खेल हुँदै
काठमाडौँ, मंसिर ११, २०७८ । काठमाडौँ । इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा…